Home About BEWGVision/Mission ရည်မှန်းချက်/သံဓိဋ္ဌါန် BEWG's Members Contact Us ReportsAccessible Alternatives ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ Burma's Environment: People, Problems, Policies Advocating for Sustainable Development Educationထင်မြင်ယူဆချက်များ နှင့် ဝေါဟာရများ Related Web ResourcesNational International Appropriate Technology သတင်း Toolkit ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ
ဤ၀ဘ်ဆိုဒ်ကိုဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့်ဖတ်ရှုပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဇော်ဂျီဖောင့်ရယူရန်	ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ ဗွီဒီယို
| Print |	E-mail	Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Friday, 04 November 2011 15:14	1. Introduction
2. မြေလှန်ပစ်ခြင်း ဒီရေတောများဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံကမ်းရိုးတမ်းလူမှုအသိုက်အဝန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ
3. တရုတ်ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရသော မိရိုးဖလာရေနံတွင်းတူးသူများ အာရ်ရကန်ရေနံစောင့်ကြည့်လေ့လောရေးအဖွဲ့
4. ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဝင်ငွေဖန်တည်းခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖန်တည်းခြင်း
5. ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ကျားထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေရှိ ကချင်လူမျိုးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
6. ကရင်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအသိအမြင်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ - ရပ်ရွာက ထိန်းသိမ်းထားသော နေရာများကို အထူးပြုလေ့လာခြင်း
7. ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများ
8. ပဲခူးတိုင်း၊ ရွှေကျင်မြို့နယ် ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
9. ရှမ်းပြည်နယ် ရေမြှုပ်ပစ်ခြင်း တာဆန်းဆည်နှင့် နယ်မြေဒေသတွင်းရှိ ရှမ်းကျေးရွာများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ၎င်း၏ရိုက်ခတ်ချက်များ
10. ကရင်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအသိအမြင်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ - ရပ်ရွာက ထိန်းသိမ်းထားသော နေရာများကို အထူးပြုလေ့လာခြင်း and credits
မြေလှန်ပစ်ခြင်း ဒီရေတောများဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံကမ်းရိုးတမ်းလူမှုအသိုက်အဝန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	မြေလှန်ပစ်ခြင်း၊ ဒီရေတောများဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံကမ်းရိုးတမ်းလူမှုအသိုက်အဝန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှု များ အစီရင်ခံစာတွင် အကြီးစားပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အုတ်ဖုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီရေတောများကို ဖျက်ဆီးနေခြင်းကြောင့် ဒေသခံဇီဝဖြစ်တည်မှုစနစ်များနှင့် မိရိုးဖလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ရခိုင်ပြည်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းကွန်ယက် (NEED-Burma) က တင်ပြထားသည်။ အာဏာပိုင်များ၏ ဖိနှိပ်မှုများက ၎င်းတို့ရပ်တည်ရေးအတွက် ဒီရေတောအရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် မှီခိုနေရသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏ အခြေအနေကို ပို၍ဆိုးဝါးစေသည်။ ရခိုင်လူမှုအသိုက်အဝန်းအကြား ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအခု ၂၀ အပေါ် အခြေခံထားသော ၎င်းဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒီရေတောများကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ပို၍ အားထုတ်သင့်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ပဲခူးတိုင်း၊ ရွှေကျင်မြို့နယ် ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	အကြီးစားသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ရာတွင် နယ်မြေဒေသရှိ ကျေးရွာများ ပါဝင်မှုမရှိခြင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ အကြမ်ဖက်ခြင်းတည်း ဟူသော ထိုလုပ်ငန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကြောင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအလေ့ အထများယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ နေရာအနှံ့အပြားမှာ စစ်တပ်များအလုံး အရင်းချထားခြင်းနှင့် အကြီးအကျယ် ရွှေတူးဖော်ခြင်းတို့ကြောင့် နယ်ခံကျေးရွာများ အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပြီး၊ မိမိတို့၏ ရိုးရာရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ခွင့် မရတော့ချေ။ မြန်မာစစ်တပ်သည် သွားလာရေးကို တင်း တင်းကြပ်ကြပ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားစေခိုင်းခြင်း၊ ရိက္ခာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကို အနိုင်ကျင့်တောင်းယူခြင်းတို့ပြုသည့်အပြင်၊ စစ်တပ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြေယာများကို သိမ်းယူခဲ့ သည်။ နယ်ခံကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာများ အကြီးအကျယ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီး၊ တချိန်တည်းမှာပင် မိမိတို့ ဘ၀ရှေ့ဆက်ရပ်တည်ရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ့နေကြပါသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
တရုတ်ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရသော မိရိုးဖလာရေနံတွင်းတူးသူများ အာရ်ရကန်ရေနံစောင့်ကြည့်လေ့လောရေးအဖွဲ့
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Tuesday, 16 November 2010 00:00	အာရ်ရကန်ရေနံစောင့်ကြည့်လေ့လောရေးအဖွဲ့(AOW)၏အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်ရေနံတောင်ဒေသတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ပိုင်ရေနံလုပ်ငန်ြး ကီး ၏ ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့် ဒေသတွင်းနေရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းနှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးဆက်သက်ရောက်နေမှုများကိုထုတ်ဖော်တင်ပြထားသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုင်းပြည် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ကျောက်တန်းများကို ဖောက်ခွဲပစ်ခြင်း အစိုးရ၏ မအောင်မြင်သော ဖွံ့ ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများနှင့် လားဟူပြည်သူတို့ အပေါ် ၄င်းတို့ ၏ သက်ရောက်မှုများ (LNDO)
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း နှင့် လောနိုင်ငံအစိုးရတို့သည်ရေကြောင်းသွား လာရေးတိုးတက်စေရန်အတွက် မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းရှိသန္တာကျောက်တန်း၊ ကျောက်မှော် များဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်း၏ ဒေသတွင်းရှိတံငါလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူ လားဟူ ရွာသူရွာသားများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်စစ်အစိုးရ၏မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့်ဖြန့်ချီရေးတွင်ပါဝင်နေမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကြောင့် လားဟူကျေးရွာ များအား အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွေ့ခြင်းတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ရှမ်းပြည်နယ် ရေမြှုပ်ပစ်ခြင်း တာဆန်းဆည်နှင့် နယ်မြေဒေသတွင်းရှိ ရှမ်းကျေးရွာများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ၎င်း၏ရိုက်ခတ်ချက်များ
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	ရှမ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့်ရေရင်းမြစ်အပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖော်ပြထားပြီး၊ ယင်းဒေသခံ လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတော်၏အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများက ပျက်စီးစေ ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းပြုထုတ်ဖော်ထားပါသည်။တာဆန်းဆည်တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ယင်းဒေသတွင်းရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်နိုင် သောဆိုးကျိုးများကိုထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဝင်ငွေဖန်တည်းခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖန်တည်းခြင်း
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	ကချင်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဝါးအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သော ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုသည် ထိန်းသိမ်းထားသော တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အသိပညာများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုနေခြင်း၏ အလွန် ကောင်းမွန်ခိုင်မာသော သာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစီမံချက်မှ အကျိုးကျေးဇူးများသည် လူထုထံသို့တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် လူထုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပါဝင်မှုက လုပ်ငန်းအရှည် တည်တန့်မှုကို ဖြစ်စေသည်ကိုသော်၎င်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ တည်ဆောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဒေသခံဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးထားသည်။ လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ ရလဒ်များအဖြစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်တောအရင်းအမြစ်များကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လျော်ညီစွာ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဝင်ငွေဖန်တည်းခြင်းနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး တို့ဖြစ်သည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ကရင်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအသိအမြင်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ - ရပ်ရွာက ထိန်းသိမ်းထားသော နေရာများကို အထူးပြုလေ့လာခြင်း
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	ဌာနေတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၊ ၎င်းတို့၏ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မိရိုးဖလာ အသိအမြင်နှင့် စနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အတွက် ကောင်းစွာအကျိုးပြုနိုင်ပါသည်။ နေရာဒေသတစ်ခုကို ဤနေရာ၊ ဤဒေသမှာ သားစဉ်မြေးဆက်နေထိုင်လာခဲ့သူများထက် ပို၍ အရေးစိုက်သူ၊ အကျွမ်းတဝင်ရှိသူ၊ မိမိတို့၏ ဘ၀အတွက်ရော၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများအတွက်ပါ ဤနေရာဒေသ ရှင်သန်ရေးအပေါ်မှာ အားထားနေရသူဟူ၍ အခြားမည်သူ ရှိနိုင်ပါဦးမည်နည်း။ အထူး သဖြင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အဖို့ နေ့စဉ်ဘ၀၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အတော် များများသည် နယ်မြေဒေသ၏ သယံဇာတများ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် အမှီသဟဲပြုနေရပါသည်။ ထို့ပြင်၊ တာရှည်ခံသော သဘာဝသယံဇာ တအရင်းအမြစ်များ စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံ များနှင့် ဂုဏ်အင်္ဂါကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာ၌ အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဌာနေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ မိမိမြေ နှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် သဘောတူစာချုပ်များက တိုး၍ တိုး၍ အသိအမှတ်ပြု လာနေ လျက်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ပါးသက်သာရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်မြေ အလိုက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများ၏ အကျိုးပြုချက်များကို ကရင်ပြည်နယ်၏ စီမံချက်လုပ်ငန်း အတော်များများက သရုပ်ဖော်ပြနေပါသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများ
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Wednesday, 17 November 2010 00:00	သဘာဝသယံဇာတများ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဇီဝမျိုးများ စုံလင်ထွေပြားမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ နယ်မြေဒေသတွင်း စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရေးတို့အတွက် ရိုးရာနည်းနာများကို နှစ်ရာစုနှစ်များနှင့်ချီ၍ အောင်မြင်စွာအသုံးပြု လာခဲ့ကြသည့် ဌာနေကရင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် ရေရှည်ဖြစ်ပွားနေလျက်ရှိသော စစ်ပွဲသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းအလေ့အထများနှင့်အညီ ရေရှည်အသုံးမပြုနိုင်အောင်အဟန့်အတားပြုနေလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် မိမိတို့ဖာသာ မိမိတို့၏ စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို အစဉ်အလာအရ လုံလောက်အောင် ဖြည့်ဆည်းလာခဲ့ကြသော ကရင်တို့သည် ယခုအခါ၌ မိမိတို့ ကိုယ်မိမိတို့ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း၊ အသက်ဆက်ပေးခြင်းမပြုနိုင်တော့ကြောင်း ကရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက် ၏အစီရင်ခံစာတွင် ထုတ်ဖော်ထားသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ကျားထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေရှိ ကချင်လူမျိုးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Reports and Publications	- ရရှိနိုင်သောအစားထိုးစရာများ	Monday, 15 November 2010 00:00	ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည်သစ်တောများနှင့် သစ်တော ထဲမှရရှိသော သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင်များစွာတည်မှီနေပါသည်။ ထိုဌာနေတိုင်း ရင်းသား ပြည်သူတို့၏ မိရိုးဖလာအသိအမြင်များ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့် အလေ့အထများသည် ဒေသ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေ ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဖိုး ထိုက်တန်သော သဘာဝ သယံဇာတများသည် ပြင်ပမှရောက်လာသူများဖြစ်သော စစ်တပ်၊ အမြတ် အစွန်း ရှာသောကုမ္ပဏီများ၊ သဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတို့၏ အဖျက်သဘောဆောင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပါးစပ်ပြောထိန်းသိမ်းမှုများကြောင့် ဆုံးပါးပျက်စီးမည့် အလားအလာရှိနေပါသည်။ (ဗွီဒီယို ကြည့်ရန်)